(Poland မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
↑ demografia.stat.gov.pl/။ Population. Size and structure and vital statistics in Poland by territorial division. As of December 31, 2019။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပိုလန်နိုင်ငံ&oldid=710588" မှ ရယူရန်
၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။